I-Stadia, iqonga elitsha likaGoogle lokudlala online, lifika | Iindaba zeGajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | | I zi ganeko, ngokubanzi, Imiboniso
Besikade siyibhengeza, Yayingumcimbi wexesha kuphela ngaphambi kokuba isigebenga esinenkunzi enkulu uG sithathe umdla kwimidlalo yevidiyo. Kwaye njengoko bekucingelwa kwiinyanga ezidlulileyo, loo mzuzu ufikile. Stadia, Iqonga elitsha kraca "labadlala umdlalo" iGoogle engena kulo ngokupheleleyo kwimidlalo yevidiyo sele iyinyani. Kwaye kungcono okanye kubi, engashiyanga mntu engenankathalo.
Gqibela Asiyi kuba ne-Google console. Kwabaninzi kuyadana kuba bebefuna ukubona ukuba yintoni uGoogle akwaziyo ukuyenza kunye nokwenza igalelo kolu shishino. Kodwa kwelinye icala, umxholo wokukwazi ukudlala yonke imidlalo yakho, nakwesiphi na isikrini nakweliphi na ixesha, nayo itsala umdla kwaye ithandwa kakhulu. Besisazi ukuba uGoogle akazukusibizela umboniso ngento engenamsebenzi, kwaye injalo.
1 I-Stadia ayisiyo ikhonsoli ... kodwa siyayithanda
2 Yabelana ngomdlalo wakho nabani na omfunayo okwangoku
3 Azisekho izixhobo zeStadia
4 Into esingayaziyo malunga neStadia
I-Stadia ayisiyo ikhonsoli ... kodwa siyayithanda
Ukwazi amandla anokubakho kuGoogle kwinqanaba lophuhliso, silindele into ebalulekileyo. Kusekugqitywe iiveki kuphawulwe kwimidiya eyahlukeneyo ukuba into azakusibonisa yona iya kuba yinto efanayo nayo INetflix yemidlalo. Kodwa le yinto khange icaceAkuzange kubekho nentetho yobhaliso okanye amaxabiso afanayo kwimidlalo. Ke asinakuthetha ngokuqinisekileyo ngohlobo lwenkonzo esinokuthembela kuyo.
Yintoni uGoogle azame ukuyithumela kuthi eyona nto icace gca. Kwixesha elizayo, sisondele, asizukufuna ikhonsoli ukudlala imidlalo yethu esiyithandayo. Singawulandela umdlalo esiwuqala kwilaptop kwiTV yethu. Kwaye xa siphuma, landela umdlalo ofanayo ngexesha elinye ebesinalo kwi-smartphone. Zombini ezi meko zibonakala ngathi yimpumelelo yokwenene, kwaye siyayithanda le nto. Kodwa nge iinkcukacha ezininzi ukuba zichazwe ngalo mzuzu.
Enye into entsha ethetha ngomdlalo weqonga oza kubonelelwa nguStadia yile ithuba lokuba nescreen ekwabelwana ngaso. Ithuba lokuxhomekeka kumdlalo, kude kube ngoku kubonakala kunzima. Amandla ekhompyuter afunekayo ukubonelela ngolu khetho ayengafikeleleki, nangona kubonakala ngathi iStadia izakususa le miqobo kungekudala kwaye iyakwamkelwa ngabadlala umdlalo.
UGoogle wayefuna ukuba yeyona nto ibalaseleyo kwihlabathi lemidlalo yevidiyo. Kwaye ineenkampani ezilinganiselwe kwicandelo. Kodwa kunye negalelo elinokubonelelwa ziifektri ezincinci kwihlabathi lezemidlalo. Ke, UGoogle ubonelela ngazo zonke iindaba ezenziwe kubaphuhlisi Zonke iinkampani eziye zasebenzisana ekudalweni kweStadia. Ngale ndlela, kuyaqinisekiswa ukuba, ngawo onke amandla e-G enkulu, babheja ekwenzeni umxholo waleqonga litsha.
Yabelana ngomdlalo wakho nabani na omfunayo okwangoku
Enye yezinto ezithandwa kakhulu ngabalandeli bomdlalo ukwazi ukwabelana ngomdlalo wakho nabanye. Ukudityaniswa kwabanye abadlali kumdlalo wethu kuya kwenziwa ngokuzenzekelayo. Kwaye njengoko sibonile kumboniso wevidiyo kuya kuba kuninzi kulula enkosi kwiqhosha elizinikeleyo ngayo. Ukukwazi ukumema abanye abadlali kumdlalo wethu kuya kuba yinto enomdla kwaye ikhawuleze. Kwaye ngaphezu kwako konke singayenza eqongeni uqobo kwaye ngaphandle kwesidingo sokumisa umdlalo wethu.
Ukuba neenketho ezinje ngoku kongeza abadlali kumdlalo obhabha unokuqinisekiswa kuphela ngabambalwa, kwaye uGoogle uphakathi kwabo. Kukwabhengezwe kwintetho yayizolo ukuba iStadia iza kudlala ezinye Izikhokelo ezithile kumdlalo ngamnye. Into ebekuqikelelwe ngayo kwiiveki ezidlulileyo. Kodwa into ebesingenayo yi ukuhlanganiswa kwesikhokelo ngokwaso kumdlalo. Kwaye oko kuyakusinceda ukuba sizinikele «Izisombululo» ngalo mzuzu kanye esizifumana siqala ngawo. Olunye uloyiso esiluthandayo.
I-Stadia, ubuncinci okwangoku, ayikho enye into ngaphandle koku iqonga lemidlalo elinenxalenye enkulu yengqondo malunga noku kuninzi ekufuneka kuchaziwe. Iqonga, ewe, ngobukhulu obukhulu njengoGoogle. Kwaye isekwe kumaziko edatha uGoogle anayo kwiplanethi yethu yonke. Akumangalisi ke ukuba esinye sezona zivakalisi ziphindaphindwayo namhlanje "Iziko ledatha liqonga lakho".
Azisekho izixhobo zeStadia
Njengoko besitshilo ekuqaleni, ukwazi ukuba uGoogle akazange abheje ekwenzeni ikhonkco ebonakalayo kuyabadanisa abanye. Kodwa umbono abawuphakamisayo ukungafuneki kwesinye isixhobo kukwangaphambili. Abalandeli bomdlalo kunye nabasebenzisi betekhnoloji esisiseko basebenzise ubuncinci bezixhobo, zithathu ukuya kuthi ga kwezixhobo ezine ngosuku. Ubuncinci, kwaye phantse ngokuyimfuneko, sisebenzisa i-smartphone mihla le. Kule nto sidibanisa, mhlawumbi, ezinye ii-headphone. Ke ilaptop, kwaye ukuba sifuna ukudlala, nayo ikhonsoli.
Nangona singenakho ukulahla into enye ebalulekileyo yokwenza ukuba amava emidlalo avuze ngokupheleleyo, umlawuli. Inkqubo ye- Umlawuli weStadia, apho imifanekiso yayisele ivuza, sayithanda. Kunye uyilo lwesiko efihla itekhnoloji yakutshanje enje iqhosha lokwabelana ngomdlalo wethu ngqo kwiYouTube, okanye enye umsizi welizwi. Iya kuba nayo Ukutshaja ngohlobo C lwe-USB, unxibelelwano wifi, izibuko yoLungiso jack nesithathu useto lombala.
Sibona njani "Cima" izixhobo ngaphandle kokuphulukana nezinye iindlela, kwaye umdlalo weqonga ayisiyonto intsha. Ukwazi ukudlala imidlalo efanayo ukuza kuthi ga ngoku, kunye nezinye ezininzi, ngaphandle kokufuna ikhonsoli. Okanye umabonwakude apho sihlala siqhagamshelene nawo wenza ukuba ukuhamba kube nkulu ngakumbi. Kwaye njengoko siphawulile, sinokuyenza ngaphandle kokuphulukana nomdlalo kwaye ukulandela inqaku elifanayo kuyenza ibengcono. Akukho bhokisi, akukho khuphela, akukho mida.
Sisoloko sithanda ukubona inkqubela. Kwaye ngokungathandabuzekiyo uStadia uya kuba ngaphambili nasemva komzi mveliso omkhulu wevidiyo. Inkqubela phambili ekuya kuhlala kulungile kubasebenzisi. Kwaye oko silindile que khonza ukuze uninzi oluchasene ngqo ngqo njenge UMicrosoft okanye uSony qaphela yophuculo kwaye uzame ukuzoyisa. Kucacile ukuba ishishini liyatshintsha kwaye siza kubona ukuba ezinye iifemu ziyakwazi ukulandela uGoogle kweli nqanaba litsha.
Into esingayaziyo malunga neStadia
Emva kwenkcazo eyonwabisayo nenamandla, imibuzo emininzi ihleli kumbhobho. Sihlala kunye ukuthandabuza okubaluleke kakhulu. Sibekwe nguGoogle ukuba sazi ngakumbi malunga nekhathalogu yemidlalo eya kuba nayo iStadia ehlotyeni. Kodwa zininzi izinto esingazixelelwanga, kwaye phakathi kwazo zibaluleke kakhulu. Olunye lwamathandabuzo amakhulu kwezi veki, kwaye oko kuya kuqhubeka nokuhlala emoyeni, kukusebenza kwenqanaba loshishino lweStadia.
Ngaba iya kusebenza ngomrhumo wenyanga? Asazi ukuba siya kuba nakho ukusebenzisa iStadia ngokuhlawula umrhumo wenyanga. Ewe kunjalo, asazi, ukuba kunjalo, ukuba singathetha kangakanani. Oku akucaci. Olunye ukhetho, ukuba ayisiyiyo inkonzo yokubhalisa, kunokuba kukuthenga imidlalo, okanye kungakho nohlobo "lokurenta" komdlalo ngamnye. Ukuqikelela esiza kuqhubeka ukukwenza de uGoogle asicacisele ngakumbi.
Elinye lamanqaku abaluleke kakhulu, asizazi ezona mfuno zisezantsi zesantya sonxibelelwano Kuya kufuneka sikwazi ukusebenzisa iStadia. Ngokukodwa kuthathelwa ingqalelo izigqibo ezixoxwa ekubonisweni kwe4K HDR kwii-60 FPS. Iinkcukacha ezibalulekileyo zoku, kuthathelwa ingqalelo unxibelelwano esinalo, ukwazi ukuba singadlala kwiqonga elitsha likaGoogle.
Ewe, kubo bonke abalandeli behlabathi lokudlala, kunjalo kubalulekile ukwazi ikhathalogu yomdlalo esinokubala ngayo. Ngale ndlela, uGoogle usicaphula ehlotyeni. Ke kuyakufuneka silinde iinyanga ezininzi ukufumana oku kungaziwa kunye nezinye ezininzi ezishiyeke emoyeni izolo. Ukubheja eqongeni apho kusekuninzi okunokwazi, kwaye kubaluleke kakhulu, kubonakala kuyingozi. Nangona siwuthanda umxholo obonisiweyo kwaye uphuculo lubaluleke kakhulu kwinqanaba lomdlalo kunye netekhnoloji thina hlala ulinde ukuba ufunde ngakumbi ngeStadia.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Stadia, iqonga elitsha likaGoogle lokudlala, liyafika